Nepal Dayari | बिनय जंगलाई लाग्याे सोच्नै नसकिने यस्तो राे,ग ? उपचार खर्च नभएर पुजा र बिनयको चल्याे रु,वाबासी, (भिडियो सहित)
बिनय जंगलाई लाग्याे सोच्नै नसकिने यस्तो राे,ग ? उपचार खर्च नभएर पुजा र बिनयको चल्याे रु,वाबासी, (भिडियो सहित)
चैत्र ८, २०७८ मंगलबार ११४ पटक हेरिएको
कुनैबेला दुर्व्यसनमा फसेर पुनर्जीवन पाएका बिनय जंग बस्नेतको अहिलेको कार्यहरु हेर्ने हो भने थोरैले पत्याउने र झन् थोरै भित्रका पनि थोरैले मात्र गर्न सक्ने काम छ । पशुपतिका बेवारिसे लास पोल्न व्यस्त हुने विनय जंग बस्नेत बेवारिसे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनयजंग बस्नेत अहिले हस्पिटल भर्ना भएका छन ।
विगतका दिनहरुमा उनी घर, परिवार, छरछिमेकी, आफन्त सबैसँग टाढिदै नशासँग नजिकिएका थिए। बिनय अहिले सामाजिक अभियन्ता बिनय जंग बस्नेत बनेका हुन्। कसैले कल्पना समेत गरेको थिएन होला उनले जाडरक्सीको नशा त्यागेर यसरी समाजमा सकारात्मक कार्य पनि गर्छन् ।
तर आज उनि हस्पिटल भर्ना हुनु परेको छ । त्यो पनि आफ्नो स्वास्थ अब्स्था कमजोर भएर, बिनय जंग बस्नेत एक समाज सेबी पनि हुन । उहालाई अहिले हेप्टाईटिस सि पोजेटिभ , र जन्डिस लक्षण देखिएको भन्ने खुल्न मा आएको छ । अब आउनुस उहा सङ्ग गरिएको कुराकानी हेरौ –